Quick poara sy osy fromazy quiche | Bezzia
Maria vazquez | 04/01/2022 10:00 | Nohavaozina amin'ny 30/12/2021 19:23 | Resipeo mora
Quiches dia mofo matsiro miaraka amin'ny base de crème shortcrust sy famenoana atody sy crème fraîche izay andrahoina ao anaty lafaoro mandrapahatonga azy. Ny mahazatra amin'ny sakafo frantsay izay manaiky karazany maro ary ankehitriny dia manao dikan-teny tsotra izahay: quiche haingana miaraka amin'ny poara sy fromazy osy.
Rehefa tsy te hanasarotra na te ho afaka hitondra ny fomba fahandro eo amin'ny latabatra ao anatin'ny fotoana fohy, loharano tsara dia ny miloka amin'ny varotra. Ny tsara indrindra dia ny mampiasa koba fohy ara-barotra, fa azonao atao koa ny mampiasa a puff pastry, azo idirana kokoa amin'ny fivarotana lehibe rehetra. Raha tsy zava-dehibe ny fotoana ary te-hanao ny kobanao manokana ianao, dia azonao atao ny mahita ny fomba hanaovana izany ao amin'ny recipe of salmon quiche mba hiomanantsika hanao fotoana.
Raha ny famenoana, ny fanomanana azy dia tsy hilaza na inona na inona aminao. Ny 10 minitra izay tsy maintsy andrahoina mialoha ao amin'ny lafaoro ny puff pastry dia ampy hanomanana azy. Ary ny hany tsy maintsy ataonao dia mahandro ovy ao amin'ny microwave ary afangaro zavatra sasany. Hanomboka ve isika?
Mofomamy puff 1
Poara fihaonambe 2 masaka, voahodina ary notapatapahina (1,5cmx1,5cm)
ovy 1, voahodina ary notetehina (1,5cmx1,5cm)
80 g ny fromazy osy voatetika
1 atody fotsy ho an'ny borosy
70 g ny dronono
Voanjo kesika vitsivitsy
Atsipazo ny mofomamy puff ary apetraka eo amin'ny lasitra (azo esorina raha tianao aroso amin'ny lovia na lovia). Asio tsara ny fotony sy ny rindrina ary esory ny koba tafahoatra. Avy eo, atsipazo amin'ny garpu ny ambany, asio taratasy parchment eo ambony ary anana maina eo amboniny. Alefaso amin'ny 190ºC ao anaty lafaoro efa nafanaina mandritra ny 10 minitra. Esory avy eo ny taratasy sy ny legioma ary andrahoy 4 minitra fanampiny. Rehefa vita dia esorina ary avela hilona eo am-panomanana ny famenoana.
Mba hanomanana ny famenoana, apetraho eo amin'ny takelaka ny ovy cubes, manarona azy ireo amin'ny plastika ary ento ao amin'ny microwave izy ireo. Andrahoy amin'ny hery feno mandritra ny 4 minitra eo ho eo mandra-pahalemy.
Etsy ankilany, ao anaty vilia iray, afangaro ny atody miaraka amin'ny crème ranoka sy sira sy dipoavatra kely.
Rehefa voaomana daholo ny ampahany amin'ny famenoana, borosy ny fototry ny puff pastry miaraka amin'ny fotsin'atody mba tsy ho lena ny famenoana.
Avy eo, zarao ny dice ovy, fromazy sy poara ao anaty lasitra.
Hamita aidino ny fangaro atody ary crème, dia ahetsiketsika kely ny lasitra mba hidirana tsara eo anelanelan'ny daoty, alohan'ny famafazana ny kesika eo amboniny.
Ento any amin'ny lafaoro ary mahandro mandritra ny 35 minitra na mandra-pametraka sy mivolombolamena amin'ny 190ºC miaraka amin'ny hafanana miakatra sy midina.
Esory ary andraso 10 minitra mba hahatezitra hihinana ny poara haingana sy ny fromazy osy quiche.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Resipeo mora » Quick poara sy osy fromazy quiche